Marketing amin'ny finday: Ataovy manokana | Martech Zone
Hipcricket's Fanadihadiana an-tserasera 2014, Fiheveran'ny mpanjifa amin'ny Marketing amin'ny finday, dia natao tamin'ny volana aprily 2014 ary mikendry olon-dehibe 1,202 6 any Etazonia. Ny fanadihadiana dia nahitana fa efa mampiasa finday ny mpivarotra ary mamaly ny mpanjifa. Ny roa ampahatelon'ny mpamaly dia nilaza fa nahazo hafatra an-tsoratra avy amin'ny marika iray izy ireo tao anatin'ny XNUMX volana lasa ary efa ho ny antsasaky ny mpanjifa no nahita fa mahasoa ilay hafatra an-tsoratra.
Na izany aza, diso ny marika ny mpivarotra raha ny amin'ny fandefasana hafatra mifandraika amin'ny azy manokana, izay mahasosotra ny mpanjifa:
52% no nilaza fa tsapa ny hafatra manelingelina na spammy.
46% no nilaza fa tsy izany ny hafatra mifandraika amin'ny tombotsoany.
33% no nilaza ny hafatra tsy nanolotra sanda.
41% no nilaza fa hizara fampahalalana bebe kokoa amin'ny marika izy ireo raha voataona tolotra na tapakila mifandraika amin'izany.
Misy toerana lehibe amin'ny fitomboan'ny marika hametrahana fifandraisana misy heviny sy maharitra amin'ny mpanjifany. Ity fikarohana ity dia manondro fa ny mpanjifa dia mandray anjara mavitrika amin'ny alàlan'ny marketing amin'ny finday, izay mamporisika. Saingy, ny marika dia tsy maintsy manolotra fanentanana mifandraika sy voatokana ho an'ny tena raha tsy izany dia tsy hahita anjara amin'ny tsena mihombo izy ireo. Doug Stovall, Hipcricket nitoloko
Tags: hipcricketdokam-barotra findaytapakila findayfinday-barotratapakila smsfifanarahana smshafatra smstolotra smsklioba an-tsoratrahafatra an-tsoratrafandefasana hafatra an-tsoratra
ISEBOX: Famoahana sy fizarana atiny horonantsary
Revolution Revolution! Vonona ve ianao?